I-Italy: Ezinyangeni eziyisishiyagalolunye zokuqala zika-2021, i-Cementir Holding yaqopha ukuthengiswa okuhlanganisiwe kwe-Euro1.01bn, ikhuphuke ngo-12% unyaka nonyaka isuka ku-Euro897m esikhathini esihambisanayo sika-2020. ) inyuke ngo-21% yaya ku-Euro215m isuka ku-Euro178m. ...
E-India: I-Ambuja Cement ithole ukuqinisekiswa okuvela ku-Science-based Targets Initiative (SBTi) ukuthi izinhloso zayo zokunciphisa i-CO2 zihambisana nesimo esingaphansi kuka-zero sokufudumala kwembulunga yonke. I-India Infoline News ibike ukuthi i-Ambuja Cement izibophezele ekunciphiseni ukukhishwa kwe-Scope 1 kanye ne-Scope 2 CO2 ngo-2...
I-Portland Cement Association ishicilela umhlahlandlela wokungathathi hlangothi kwe-carbon ngo-2050
E-US: I-Portland Cement Association (PCA) ishicilele umhlahlandlela wokungathathi hlangothi kwekhabhoni emkhakheni kasimende nokhonkolo ngo-2050. Ithi umqulu wamasu ukhombisa ukuthi imboni kasimende yase-US kanye ne-value chain, ingabhekana kanjani nesimo sezulu. shintsha, nciphisa umbala...
Isibikezelo sokukhiqizwa kukasimende waseNdiya sizofinyelela ku-332Mt ngo-2022
E-India: Isikhungo sokulinganisa i-ICRA sibikezele ukuthi ukukhiqizwa kukasimende waseNdiya kuzokhuphuka ngo-12% unyaka nonyaka kuye ku-332Mt ngo-2022. Yathi isidingo sokuvala umnyango ngaphambi kwe-Covid-19, isidingo sezindlu zasemakhaya kanye nokuthathwa kwengqalasizinda shayela ukuphakama. I-ICRA ibikezele ukuthi isidingo sizokhuphuka ngoboya ...
IHolcim Russia ibona ngeso lengqondo ukuncishiswa kokukhishwa kwegesi ngo-15% ngo-2030 kanye nokukhiqizwa kukasimende ongathathi hlangothi ngo-2050.
I-Russia:I-Holcim Russia izibophezele ekufezeni ukwehla kwe-CO2 ekhishwa ngo-15% ekukhiqizeni kwayo usimende phakathi kuka-2019 no-2030 kuya ku-475kg/t isuka ku-561kg/t. Ihlela ukuqhubeka nokunciphisa ukukhishwa kwe-CO2 kasimende ibe ku-453kg/t ngo-2050, nokusebenzisa ezinye izinyathelo zokuqinisekisa ukungathathi hlangothi kwayo kwe-carbon dioxide ...
Ukuthengiswa kukasimende kwekota yokuqala yasePakistan kwehle ngonyaka wezimali ka-2022
E-Pakistan: I-All Pakistan Cement Manufacturers Association (APCMA) iqophe ukwehla ngo-5.7% unyaka nonyaka ekuthengisweni kukasimende kukonke kwikota yokuqala yonyaka wezimali ka-2022 kuya ku-12.8Mt isuka ku-13.6Mt esikhathini esihambisanayo sonyaka wezimali ka-2021. Umsebenzi wokwakha wendawo oqinisiwe ohlanganisa...
I-Cemex España ukuze ithole inkwali kanye nezitshalo ezintathu zikakhonkolo ezixutshwe ngomumo ezivela eHanson Spain
ESpain: I-Hanson Spain ivumile ukudayisa inkwali yayo yaseMadrid kanye nezitshalo ezintathu zikakhonkolo ezixutshwe ngomumo eBalearics ku-Cemex España. Umthengi uthe ukutshalwa kwezimali kuthembisa imbuyiselo ephezulu futhi kuyingxenye yesu lokuqiniswa komhlaba wonke kwezikhundla zalo ezihlanganiswe zibheke phezulu eduze kwedolobha elikhula kakhulu...